ASUS Myanmar Font without Root apk - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application ASUS Mobile Fonts Phone Application ASUS Myanmar Font without Root apk
ASUS Myanmar Font without Root apk
Maung Pauk at 11:04:00 PM Android Application, ASUS, Mobile Fonts, Phone Application,
Font Style ပါတဲ့ ASUS ဖုန်းတွေကို Root မလိုဘဲ မြန်မာစာထည့်နိုင်မယ့် apk လေးဖြစ်ပါတယ်.. Ko Kaung Htoo San ရေးထားတာဖြစ်ပြီး သူရေးထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.
ဒီ Application လေးကတော့ ASUS စမတ်ဖုန်းများကို Root မလိုပဲ မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနိုင်မဲ့ Application လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကနေပြီး ASUS စမတ်ဖုန်းများထဲတွင် Font Style ပါဝင်တဲ့ ဖုန်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးက version 7.xx တွေထိ Support ပေးပါတယ်။ ကျတော်ကိုယ်တိုင်တော့ version 7.xx ထိ စမ်းကြည့်ထားပါတယ်။
ဒီ Application လေးဖြစ်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Ko Mst Ygn ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ ကျတော်ကတော့ Service ညီကိုတွေအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာလောက်မှာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ Application လေးကို လုပ်ကြည့်ဖြစ်လိုက်တာပါ။ အသုံးပြုလိုမယ်တော့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Special Thanks - Ko Mst Ygn
Font Style ပါတဲ့ ASUS ဖုနျးတှကေို Root မလိုဘဲ မွနျမာစာထညျ့နိုငျမယျ့ apk လေးဖွဈပါတယျ.. Ko Kaung Htoo San ရေးထားတာဖွဈပွီး သူရေးထားတဲ့အတိုငျး ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ.
ဒီ Application လေးကတော့ ASUS စမတျဖုနျးမြားကို Root မလိုပဲ မွနျမာစာ ထညျ့သှငျးနိုငျမဲ့ Application လေးဖွဈပါတယျ။ ဒီ Application လေးကနပွေီး ASUS စမတျဖုနျးမြားထဲတှငျ Font Style ပါဝငျတဲ့ ဖုနျးမြားတှငျသာ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Application လေးက version 7.xx တှထေိ Support ပေးပါတယျ။ ကတြျောကိုယျတိုငျတော့ version 7.xx ထိ စမျးကွညျ့ထားပါတယျ။
ဒီ Application လေးဖွဈအောငျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Ko Mst Ygn ကို ကြေးဇူးအမြားကွီး တငျပါတယျ။ ကတြျောကတော့ Service ညီကိုတှအေတှကျ တဈထောငျ့တဈနရောလောကျမှာ အထောကျအကူပွုစရေနျ ရညျရှယျပွီး ဒီ Application လေးကို လုပျကွညျ့ဖွဈလိုကျတာပါ။ အသုံးပွုလိုမယျတော့ ရယူနိုငျပါတယျ။ Special Thanks - Ko Mst Ygn
Credit : Kaung Htoo San
Download ASUS Myanmar Font apk : 476.24 KB
Android Application, ASUS, Mobile Fonts, Phone Application
Android Application ASUS Mobile Fonts Phone Application